होम सुवेदी | साहित्य संसार
लेखक: होम सुवेदी
लघुकथाः शुकबारे भिखारी होम सुवेदी दैनिक रुपमा माग्न आउनेहरुलाई शनिवार माग्न आउन नपाउने गरी टोलमा पालो बाँधिएको थियो । ‘तिम्रो पालो आइतबार, तिम्रो सोमबार, तिम्रो मांगलबार, तिम्रो बुध, तिम्रो बिही तिम्रो शुकवार । अरु बारका दिन अर्को टोलमा जाऊ’ आदि आदि । यसो गर्दा अलिक […]
साधारण गाउँले अपठित किसानहरु अझै पनि उनलाई बिरस्पति पन्चपर्धान भन्छन् तर उनको नाम बृहस्पति हो । पन्चपर्धानबाट बुझिन्छ उनी उ बेलाका प्रधान पञ्च थिए । पञ्चायतको पछिल्लो चरणमा उनी आफ्नो गापंमा निरन्तर पन्ध्रवर्ष प्रधानपन्च भएपछि उनी राजनीति फेरियो अनि उनी पनि फेरिएर अध्यक्ष भए गाविसका […]
छोरो एसएलसीमा फेल भएकाेमा अामाचाहि‌ विद्यालयमा बडाे अाक्रोशित भएर पुगिन् र हेडमास्टरसका साथ कड्केर बाेलिन्- “किन मेरो छोराे फेल गर्नु भाे ? सँगैका धेरै पास भए मेरै चाहि‌ किन फेल भएकाे ?” हेडसरले बडाे स‌यमित भएर भने- “उ अलिक कमजाेर नै हाे । यसैले हाेला […]
आफ्नो घरमा बडाे मजाले बसेका पालिएका एक जाेडी कुकुर बेलाबेला भुक्थे र घरकाे सुरक्षा गर्थे । आफ्ना घरकाे राम्रो सुरक्षा गरिरहेकाेमा तिनकाे मालिक पनि खुसी थियाे । बेला बेला खान मिल्थ्याे । घर मालिकबाट उनीहरुले राम्रो माया पाएका थिए। समयक्रममा तिनीहरुकाे एक छाउराे जन्म्याे । […]
पचासी वर्षबाट उकालो लागे पनि सुख छैन चामे बूढालाई । न गौंथलीलाई नै सुख छ । बूढा भएर पनि चामे आफ्नै घरबारीको काममा लाग्छन् । गौंथली उही चुलो धन्दा, उही भाँडाबर्तन, उही पँधेरोपानी र उही गाईवस्तुको कुँडोपानी आदिमा सकिनसकी लागिरहेकी नै छिन् । धेरै गाईवस्तु […]
केही वर्ष अघिसम्म पनि उनी टेलिभिजन, मोबायल, नेट आदिबाट छोरीछोरीलाई टाढै राख्नु पर्ने मान्यतामा थिए । तर आवश्यकताले उनलाई पनि च्यापेर ल्यायो । अनि छोराछोरी र आपूmले समेत घरमा मोबालय, टेलिभिजन आदिको जोहो गर्नै प¥यो । अचेल ता उनी कतै कसैलाई उपदेश दिनु पर्दा वा […]
कन्चटमा पेस्तोल दागेको त्यो दिन
घटना घटेको अवधिपछिका निकै वर्ख बिते । उहाँकरुको भाटे कारबाहीबाट कारबाहीको प्रक्रिया अलिक बेग्लै हुन थालेको थियो । देशै भरिका गाविसका कार्यालय भवनहरु ता धेरै नै ध्वस्त गरिसक्नु भएको थियो । सेना र पुलिस चौकीहरुमा पनि उहाँहरुले हमला गर्न थालिसक्नु भएको थियो । त्यसबाट देशमा […]
कि कसौ ए माइला बाउ ?
उ बेलाको कुरा बेग्लै हो उ बेला के के मात्र गरिएन माइला बाउ ? अलिक बढी नै थियाे मेरो भाउ जाने बुजेको सबै थोक गरियो कहिले धरापमा परियो कहिले बारुदमा परियो मर्ने ता अरु नै थिए आफूले ता बाँच्नु नै थियो बाँच्ने काम गरियोे यसैले […]
बलरामको तरङ्ग “यस पटक कस्ता मान्छेलाई डेरा दिया होला यस मोराले !” मनमनै वलरामले कुरा खेलाउने गर्थे । “यसो हेर्न हुने मान्छेलाई त डेरा दिनु पर्छ नि । कमसे कम घरको रेखदेख पनि हुन्थ्यो अनि…..!” उनले नचाहेको जस्तो मान्छे उनका छिमेकीमा बस्न आयो भने उनको […]